Shiinaha Shiinaha Soo saaraha Aluminium Hardware Agabka Daaqadda iyo Albaabka Xarigga Cimilada Wax soo saarka iyo Warshada |JYD
Xariijimaha cimiladu raso
Nooca is-ku dhejinta
Xariijimaha caagga ah
Soo deji faylka
Soo-saare Shiinaha Aluminium Hardware Agabka Daaqadda iyo Xariiqda Cimilada Albaabka
JYD waxay ku takhasustay soo saarista xariijimaha cimilada ee tuulan muddo 20 sano ah.Qeexitaanno kala duwan oo badeecado ah, wax-ka-beddelid taageero
email noogu soo dir Muunado bilaash ah
Maxaa noo doora
Baakadaha & Rarista
Sharaxaada wax soo saarka
JYD waa astaan ​​weyn oo ku jirta warshadaha sare ee dhogorta, oo leh tayo la dammaanad qaaday.Isticmaalka tayada sare leh ee deegaanka saaxiibtinimo ee PP polypropylene iyo polypropylene dhogorta sare ee xoogga leh, iyadoo la adeegsanayo dhogorta tayada sare leh ee jilicsan ee jilicsan, ma jiri doonto wax xoqan oo la xidhiidha dusha sare, iyo waxqabadka xiritaanka ayaa 5 jeer ka sarreeya alaabta caadiga ah.Way ka fiican tahay oo aad waxtar u leedahay in la yareeyo khilaafka oo la kordhiyo nolosha adeegga.Tilmaamo iyo midabyo kala duwan oo laga soo xusho
1. Cimilada ciribtirka aluminium / alwaax daaqada iyo albaabka
2.In lagu sameeyo dunta polypropylene ee tolsan
3.Xajmiga kala duwan, dhererka, ballaadhka dhabarka iyo dhumucyada la heli karo
4. Boorka-ka-hortagga, cayayaanka-ilaalinta, dhawaaqa-celinta, dabaysha--diidka, roob-diidka
5. Leh waxqabad shaabad wanaagsan
Magaca xariijimaha cimilada
Cabbirka ballaca saldhigga: 4mm, dhererka: 6mm (ku dar dhererka saldhigga), la habeeyay
Qalab 100% PP dun
Midabka Caddaan, cawl, madow, bunni, iwm, la habeeyey
Shaqada ka-hortagga boodhka, cayayaanka-ka-hortagga, biyaha-aan-celinta, qaylada u adkaysta, dabaysha
Codsiga aluminium daaqada iyo albaabka, daaqad bir balaastikada ah iyo albaabka, albaabka galaas iyo daaqada
MOQ 5000 mitir
Tusaale la heli karo(igu dhufo si aad muunad u hesho)
Waxaa inta badan loo isticmaalaa albaabada iyo daaqadaha birta ah ee caagga ah, albaabbada aluminiumka iyo daaqadaha, albaabbada alwaaxyada iyo daaqadaha iyo albaabbada iyo daaqadaha kale ee qurxinta dhismaha.
Macaamiisha iskaashiga ah
S: Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo saaraha?
J: Waxaan nahay warshad.
S: Waa intee wakhtiga dhalmadaada?
J: Guud ahaan waa 5-10 maalmood haddii alaabtu kayd tahay.ama waa 15-20 maalmood haddii alaabtu aysan ku jirin kaydka, waxay ku xiran tahay tirada.
S: Ma bixisaa muunado?ma bilaash baa mise waa dheeraad ?
J: Haa, waa bilaash.
S: Sideed u dammaanad qaadi kartaa tayada?
A:Kooxda injineerada ee khibrada leh iyo ilaalinta tayada adag.Haddii aad la kulanto dhibaatooyin tayo leh waxaan kuu ballan qaadaynaa in aan beddelno alaabta ama aan soo celinno dhaqaalahaaga.Alaabooyinka waxaa ansixiyay SGS,ISO9001.
S: Ma helayo inaan rabo, ma ii samayn kartaa OEM?Ka warran tirada dalabka ugu yar?
J: Haa, waxaanu nahay soo saaraha OEM xirfadle ah oo khibrad ka badan 20 sano ah, waxaanu leenahay awood casho oo weyn, laakiin marnaba ma diidno amarrada yaryar, MOQ waxay noqon kartaa 5000 mitir.
Faahfaahinta Baakadaha: Ku xiridda kartoonka warqadda, bacaha rullalulatada ee bac, ka dibna ku rid kartoon
4 duub / kartoon, 250 mitir / duub
Dekadda:SHENZHEN SHANGHAI GUANGZHOU
Cabbirka baakidhka keliya: 54*28*42cm
Miisaanka kaliya ee guud: 5-8kg
Hore: Nooca Fins (silicone iyo waterproof)
Xiga: Qiimaha ugu Wanaagsan 5*6/7*5/6*6 Cimilo-cimilo-Xilliyeedka Albaabada
Waxaan nahay saaraha proffecinal albaabka iyo daaqada cirifka cimilada, waxaan ku siin karnaa qiimaha ugu fiican iyo tayada wanaagsan, waxaan leenahay afar warshadood oo keeni kara waqtiga
1.Muunad bilaash ah
2. La-tashiga khadka tooska ah.
Iibka ka dib:
1. Tilmaamaha rakibidda.
2. Nolosha shelf ee xariijinta cimiladu waa 1-3 sano iyada oo aan la furin iyo 1 sano ka dib marka la furo;
Nolosha shelf ee xariijinta cimiladu waa 3-5 sano iyada oo aan la furin iyo 2 sano ka dib marka la furo.
3. Su'aashaada waxaa lagaga jawaabi doonaa 2 saacadood gudahood.
A:Kooxda injineerada ee khibrada leh iyo ilaalinta tayada adag.Haddii aad la kulanto dhibaato tayo leh,
waxaan balan qaadaynaa inaan badeecooyinka bedeli doono ama aan soo celino dhaqaalihiina.Alaabooyinka waxaa ansixiyay SGS,ISO9001.
bedelida cimilo daaqada tuulan oo kaxaysa vinyl w...
6*6mm barar ka-hortagga qaylada cimilada
3P3L madaw silikoon xariijimo cimilo ah
Nooca tooska ah ee dhogorta ayaa tuulan xariijimaha cimilada
7*8 xariijimo cimilo oo xirxiran
F10 5*4mm waxay dareemeen xariijimo cimilo oo tuulan